युद्धका लागि तयार हुन् भारतलाई चीनको चेतावनी, तिब्बतमा युद्धअभ्यास » खबरहरुको एउटै केन्द्र
युद्धका लागि तयार हुन् भारतलाई चीनको चेतावनी, तिब्बतमा युद्धअभ्यास
मंगलवार, श्रावण ३, २०७४ १२:३४ मा प्रकाशित !
दिल्ली- चीनसँगको सीमाका सबै क्षेत्रमा पूर्ण युद्धका लागि तयार रहन चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमले भारतलाई मंगलवार चेतावनी दिएको छ । दुई देशबीचको असीमांकित तीन हजार ४८८ किलोमिटर इलाकामा द्वन्द्वका नयाँ पाटा खुलेका भनी लेखिएको छ ।
द टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार चीन भारतसँग युद्धमा जान नडराउने र दीर्घकालीन द्वन्द्वका लागि तयार रहेको चीनको सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सको टिप्पणीमा उल्लेखित छ ।
अरुणाचल प्रदेशनजिकैको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले युद्धअभ्यास गरेपछि भारत र चीनबीच द्वन्द्वका नयाँ भौगोलिक विन्दुहरू खुलेका छन् ।
सिक्किम सिमानामा रहेको दोङलाङमा दुई देशका सेनाहरू आमनेसामने हुँदा बेइजिङले आक्रामक नीति अपनाएको छ भने सरकारी सञ्चारमाध्यमले युद्धको आवाज उठाइरहेका छन् ।
‘चीनले वास्तविक सीमारेखातिर थप प्रतिकार गर्न सक्छ । भारतले विभिन्न ठाउँमा द्वन्द्व चर्काउन चाह्यो भने पूरै सीमामा चीनसँग द्वन्द्वका लागि तयार हुनुपर्छ,’ राष्ट्रवादी ट्याब्लोइड ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ । ‘चीनले आफ्नो सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि भारतसँग कठोर सैन्य भिडन्त गर्न डराउँदैन र लामो समयको द्वन्द्वका लागि तयार भएर बसेको छ,’ उसले थप्यो ।
‘राष्ट्रिय शक्तिको वृद्धिसँगै चीन दुर्गम सीमा क्षेत्रहरूमा स्रोतसाधन तैनाथ गर्न सक्षम छ । यी क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिका लागि अनि चीनको अखण्डतालाई रक्षा गर्नका लागि वातावरण बनेको छ । तिब्बती क्षेत्रमा सडक र रेल भारत, नेपाल र भुटानको सीमाक्षेत्रसम्म विस्तार भएको छ । यो सैन्य शक्तिका अलावा समग्र आर्थिक शक्तिको समेत प्रतिस्पर्धा हो,’ लेखमा उल्लेखित छ ।
चीनले दोङलाङ विवादका लागि भारतकै दोष रहेको बताएको छ । भारतीय सैनिकहरू उक्त क्षेत्रमा घुसेर चिनियाँ सैनिकलाई सडक बनाउनबाट रोकेको चीनको आरोप छ । उक्त क्षेत्रमा भुटानको पनि दाबी छ ।
यस्तै चीनले तिब्बतमा ११ घण्टासम्म सैन्य अभ्यास गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय मिडियाका अनुसार सिक्किम सेक्टरको सीमामा भारतसँग जारी सैन्य गतिरोधकाबीच चीनले सैन्य अभ्यास गरेको बताइएको छ । खबर अनुसार युद्धअभ्यास चीनका जनतालाई आश्वस्त पार्नका लागि गरिएको हो कि, उसको सेना मुस्किल अबस्थाका लागि तयार छ ।
PREVIOUS POST Previous post: जम्मू-कश्मीर पछि कर्नाटकले माग्यो अलग झंडा
NEXT POST Next post: मोदी गाउँपालिकाको बजेट रु ३७ करोड ४३ लाख, द्वन्द्वपीडितका हकदारलाई तीन करोड वितरण
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, श्रावण ३, २०७४ १२:३४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, श्रावण ३, २०७४ १२:३४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, श्रावण ३, २०७४ १२:३४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, श्रावण ३, २०७४ १२:३४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, श्रावण ३, २०७४ १२:३४